किन बढ्दैछ निःसन्तानको समस्या, निःसन्तानको लागि आइभिएफ बरदान सावित – Ishan Hospital
पछिल्लो समय धेरै दम्पतीहमा नि:सन्तान हुने समस्या छ । के कारणले यस्तो हुन्छ ? नि:सन्तान दम्पतीको लागि आइभिएफ किन उपयोगी छ ? आइभिएफ किन सबै नेपालीको पहुँचमा छैन् ? लगाएतका विषयमा अंकुरण खबरका लागि ईशान बाल तथा महिला अस्पतालमा कार्यरत आइभिएफ स्पेशलिष्ट डक्टर नेहा हुमागाईंसँग अनिता मगरले गरेको कुराकानी… निःसन्तान हुनु नयाँ समस्या या नयाँ रोग होइन । यो हाम्रो समाजमा पहिलेदेखि नै धेरै दम्पतीहरुले भोगेको समस्या हो । तर पछिल्लो समय विभिन्न कारणले यो समस्या बढेको पाइन्छ । यद्यपी यो समस्या औषधि उपचार ग¥यो भने ठिक हुन सक्छ भन्ने ज्ञान बढेकाले निःसन्तान हुनबाट धेरै जना जोगिएका छन् । इन्फर्टिलिटी (निःसन्तान) के हो ? इन्फर्टिलिटी भन्नाले विवाहित दम्पत्तीले विवाह गरेको, सँगै सम्पर्क गरेको एक वर्षसम्म परिवार नियोजनका कुनै पनि साधनहरु नअपनाई बच्चाको निम्ति प्रयास गरेको खण्डमा पनि गर्भ नबसेको अवस्था छ भने त्यसलाई इन्फर्टिलिटी भनिन्छ । कोही कोही चाँही एक दुई महिनामै हतास भएर आउँनु हुन्छ त्यसलाई इन्फर्टिलिटी भनिदैन । निःसन्तान हुने प्रमुख कारण : धेरै कारणले बच्चा नहुने समस्या आउन सक्छ । यद्यपी यसको प्रमुख कारण भनेको उमेर हो । पहिले २०,२२ वर्षमा विवाह हुन्थो बच्चा छिट्टै जन्माउथे भने, आजकाल अध्ययन,करियर,कामकाज भन्दै धेरैले ३० वर्ष कटेपछि बच्चा जन्माउने योजना बनाउँछन् । यसको अर्थ ३० वर्ष पुगिसकेपछि सबै निःसन्तान हुन्छन् भनेको होइन तर निःसन्तान हुने सम्भावना चाँहि अलि धेरै हुन सक्छ । अर्को कारण भनेको खानपान (चिल्लो, बाहिरको जँगफूड) पनि नि:सन्तानको हुने अर्को कारण हो । त्यस्तै बढी तौल, निस्क्रिय जीवनशैली, मधुमेह थाइराइड लगाएतका रोग भएका व्यक्तिमा पनि यो समस्या आउँन सक्छ । पाठेघर लगाएत विभिन्न अंगमा भएको संक्रमण, बढी तनाव, वंशाणुगत गुण आदिले पनि यो समस्या निम्तन सक्छ । त्यस्तै पुरुषहरुमा स्पम्पमा समस्या आउँदा पनि यो समस्या हुन सक्छ । यसको साथै बढी मात्रमा धुमपान, मध्यपान सेवन गर्ने,कुलतमा फस्नाले पनि निःसन्तानको समस्या आउँन सक्छ ।